Apple ga-arụ ọrụ nyocha ihe abụọ ma ọ bụrụ na ị wụnye beta nke MacOS High Sierra | Esi m mac
Apple ga - eme ka nyocha ụzọ abụọ ma ọ bụrụ na ị wụnye MacOS High Sierra beta
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | MacOS Sierra ukwu, Noticias, ọtụtụ
Na Mọnde gara aga, June 5, Apple gosipụtara sistemụ arụmọrụ ọhụrụ ya maka Mac, na aha MacOS High Sierra, nke a ga-ewepụta n'oge mgbụsị akwụkwọ ọzọ. Companylọ ọrụ nke apụl amị emeela ka anyị gwa anyị ozi ọma ahụ, mana oge ụfọdụ na ebumnuche nke ịga n'ihu na -emepụta atụmanya, hapụ mgbe niile nkọwa anyị ga-achọpụta na betas dị iche iche nke MacOS High Sierra. N'oge ndị ọzọ, anyị bụ ndị ọrụ na-achọpụta ma kesaa ha. N'okwu a, ọ bụghị atụmatụ ọhụrụ, mana atụmatụ ga-abụ iwu ozugbo ị wụnye ụdị beta.
Ọ bụrụ na e debanyere aha Apple ID gị na mmemme Mmepụta Apple ma ọ bụ banye na betas ọha na eze, eleghị anya ị natara email na-esonụ.
N'ime ya ka a mara ọkwa na Apple ga-arụ ọrụ nyocha abụọ maka gị na-akpaghị aka, ọ bụrụ na ị kpebie ịwụnye ọ bụla nke betas ọha na eze nke MacOS High Sierra n’oge ọkọchị.
O doro anya na Maka ebumnuche nche, Apple chọrọ ka ndị ọrụ niile na-arụsi ọrụ ike jiri nkwenye nzọụkwụ abụọ. Ọ bụ ezigbo ihe, n'ihi na n'ime ụwa ejikọtara ọnụ, ọ na-emebi anyị niile, n'ihi na ọ bụrụ na mmadụ enweta onye ọrụ Apple, ha nwetara ozi ha debeere: kọntaktị, ozi-e, akara ekwentị, ya bụ, ozi dị nro n'aka nke ọ bụla nke kọntaktị gị.
Ọ dị mfe iji ya rụọ ọrụ. Iji mee nke a, ị ga-ebu ụzọ deba aha Apple ngwaọrụ ị na-ejikarị. Mgbe ị banyere Apple ID na paswọọdụ, ọ na-agwa gị ihe ngwaọrụ dị. Họrọ nke ị kacha were n’aka ma pịnye paswọọdụ Nke a adịghị mgbagwoju anya ma ọlị, a na-eme ihe ahụ ozugbo. Naanị ị ga-enyocha ya ọnụọgụ isii nke eziterela na ngwaọrụ ahụ na ajụjụ. Dị mfe dị ka nke ahụ.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ma nwee oge ma chọọ ịwụnye MacOs High Sierra ọha betas n'oge okpomọkụ a, ana m akwado ya ederede site n'aka onye anyị na Jordi ka esi eme ya. N'ezie, jiri nlezianya na ọ dịghị mgbe gị isi usoro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple ga - eme ka nyocha ụzọ abụọ ma ọ bụrụ na ị wụnye MacOS High Sierra beta
Nweta ndebiri ndebiri maka Photoshop naanị otu euro
Jony Ive chọrọ ịkepụta ncha ncha